Anyị na-akuziri gị otu esi gbanyụọ egwu Spotify na ihe ọhụụ ọhụrụ | Gam akporosis
Etu ịtọọ ngụ oge iji gbanyụọ egwu Spotify: kedu ihe ọhụụ na ọrụ nkwanye
Spotify debuts ohuru na igwe gam akporo: ngụ oge iji gbanyụọ egwu ka ị were nwayọ. Otu n'ime njirimara ndị ahụ nwere ike ịbụ obere, mana na n'ikpeazụ mee ka ahụmịhe onye ọrụ ka mma site na igwegharị anyị; karisia ma oburu na ejidere ayi na iyi a.
N'oge a atụmatụ Spotify ọhụrụ a dị naanị maka ndị ọrụ gam akporo. Site na ihe anyị mara, na-abịa site na ihe nkesa. Nke ahụ bụ, ị gaghị enwe ike imelite ya ka e ziga faịlụ ndị dị mkpa ka otu n'ime ndị ị gbanye ngwa ahụ nhọrọ ahụ gosipụtara.
Ihe ọhụrụ a, dị ka nke yiri ya na-abịa n'isi nso, gosi na menu "na-egwu ugbua". Ihe ọ na-eme bụ ịkwụsị egwu ahụ mgbe anyị kpebirila oge. Mgbe nke a gasịrị, egwu ahụ ga-akwụsị. Ya mere ọ dị dị ka otu n'ime ọrụ ndị ahụ zuru oke maka mgbe anyị kwụsịrị ịkpọ Spotify ma banyeworị n'ime akwa.
para tọọ oge ị ga-ehi ụra, anyị na-eme nke a:
Anyị na-emelite ngwa ahụ na mbụ ma ọ bụrụ na anyị emebeghị ya n'ime izu.
Anyị mụta nwa ọ bụla song, ndepụta, wdg ...
Na ihuenyo "Ugbu a na-egwu egwu", pịa menu.
Anyị na-agbada otu n'ime nhọrọ ikpeazụ na anyị ga-ahụ «na-ehi ụra ngụ oge».
Anyị nwere ike ịhọrọ n'agbata oge dị iche iche site na 5 nkeji ruo 1 awa. Ihe kariri iji hie ura n'udo mgbe egwu egwu kacha amasị anyị.
Oge anyị pịa nhọrọ ọ bụla ngụ oge ga-amalite ma egwu ga-agbanyụ Mgbe m rutere na njedebe Anyị nwere ike ịkwụsị ngụ oge site na ikwugharị usoro niile ekwuru iji họrọ iji gbanyụọ oge ahụ.
Otu n'ime mmelite ndị ahụ dị mkpa ka anyị ghara ibili n'abalị iji gbanyụọ Spotify nke ahụ na-ekwughachi onwe ya na-enweghị njedebe ruo echi. Lelee ma ọ bụrụ na ịnweela ya n'ọrụ site na Spotify gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu ịtọọ ngụ oge iji gbanyụọ egwu Spotify: kedu ihe ọhụụ na ọrụ nkwanye
Samsung Galaxy S8 + na-anata mmelite nche May
Fọdụ ndị ọrụ OnePlus 7 Pro nwere ụda iwe na oku ọdịyo